XOG: Imaaraadka Carabta & DF oo isku heysta Puntland & cida ku gacan sareyneysa | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Imaaraadka Carabta & DF oo isku heysta Puntland & cida ku...
XOG: Imaaraadka Carabta & DF oo isku heysta Puntland & cida ku gacan sareyneysa
Puntlland ayaa u iminka u muuqata iney ku loolamayaan labo garab oo midba danihiisa gaarka ah wata,waana Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo gacanta ku hayo illaha dhaqaalaha ugu muhiimsan ee Puntland.
Carabta ayaa taageero dhaqaalo oo baaxad leh siinaya madaxweynaha Puntland Siciid C/llaahi Deni si uusan ugu jilcin Dowladda Federaalka oo xiriir aan wanaagsaneyn kala dhaxeeyo Dowladda isku taga imaaraadka Carabta oo si weyn u garab taagan qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka.
Dadka siyaasadda ku xeel dheer ayaa sheegaya in Puntland ay xilligan ku loolamayaan waxa dab ka hurinayana ay yihiin Labado quwadood oo midi ay tahay Dowladda dhexe ee dalka iyo dalal kale oo shisheeye oo Imaaraadka qeyb ay ka tahay.
Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo oo khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo Puntland ayaa dooneysa iney meesha ka saarto xukunka Deni si ay u gaartana hadafkaasi waxay ku bixineysa dhaqaalo badan halka Imaaraadka Carabta ay dooneyso iney difaacato mas’uulka ugu sareysa Puntland oo gacan saar la leh,islamarkaana u suurta gelinaya iney ka fushato waxay doonto deegaanada maamulka Puntland.
Xiisadda hadda soo cusboonaatay ayaa u muuqata mid ay sii hurinayaan Labadaasi quwadood haddii aan la daba qabana ay ka sii dari doonto.
Magaalada Garoowe waxaa xilligan si aad ah looga dareemayaa Xiisadda u dhaxeyso madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo guddoomiyaha Baarlamaanka Cabdixakiim Maxamed Axmed (Dhoobo),kaasi oo salka ku haya awoodda ugu sareysa ee maamulka Puntland.
Xalay waxaa dagaal culus uu magaalada Garowe gaar ahaan xarunta Baarlamaanka ku dhexmaray Ciidamo ka socday Madaxtooyada iyo ciidankii ilaalinayay Xarunta Baarlamaanka maamulka Puntland,isrisaaseyntaasi oo sababtay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.